८ वर्षिय बालक, गाडी देखि स्कुटर चलाउने विश्वास नै गर्न गाह्रो ! - NepalDut NepalDut
८ वर्षिय बालक, गाडी देखि स्कुटर चलाउने विश्वास नै गर्न गाह्रो !
काठमाडौँमा एकजना अचम्मका बालक छन् । उनी आजकाल आकर्षणका केन्द्र बनिरहेका छन् । यी ८ वर्षीय बालकसँग एक अद्भुत क्षमता छ। उनको नाम हो कृजल थापा।